6. Y-Pay နှင့်ဆက်သွယ်ရန်။
အပြောင်းအလဲများ အတွက် အသိပေးကြေငြာခြင်း။
Y-PAY account ဖွင့်ရန်အတွက် သင်၏အမည်၊နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် e-mail လိပ်စာတို့ကို ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ၀န်ဆောင်ခပေးရန်အတွက် သင်၏ bank account Number ကို ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်အား သင်၏ လုံခြုရေးနှင့်ဆိုင်သော မေးခွန်းတစ်ခု (ဥပမာ။ ။ what is your nick name) ကိုလည်း မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ငန်းများကို အစီစဉ်တကျလုပ်ဆောင်ရန်၊ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ password အား မေ့လျော့ ခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် password အသစ်ထုတ်ပေးရန်ျနှင့် သင်၏ account စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် လိုအပ်ချက် များပေါ်ပေါက်လာပါက သင့်အား ဆက်သွယ်ရန်တို့တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လှသော မေးခွန်းများဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အင်တာနက်ပေါ်မှ ဈေးဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု အတွက်ငွေပေးချေခြင်း၊ တို့အတွက် Y-PAY ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ (Y-PAY Username,Password နှင့်သင်၏ Bank Account Pin Number) တို့ကို မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဤအချက်အလက်များကို Y-PAY မှတဆင့် ရယူမည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ပြုမပြုကို ကြည့်ရှုရန်သင်၏ Internet Address (IP address) သို့မဟုတ် Y-PAY account ကို အသုံးပြုရန် သင်သုံးသော လမ်းကြောင်းကိုလည်း ရယူထားမည်ဖြစ်သည်။
Website သို့ဝင်ရောက် ကြည့်ရူသည့် သတင်းအချက်အလက်များ။
Y-PAY Web site ထဲသို့ သင်ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ ထွက်သွားခြင်းပြုလုပ်ပါက World Wide Web communication ကြောင့် သင်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုလိမ့်မည့် Web address များကို ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် သိရှိနေပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် သင် Y-PAY Web site ထဲရှိနေခိုက် မည်သည့်စာမျက် နှာကို ကြည့်ရှုနေသည်၊ မည်သည့်browserအမျိုးအစားကို သုံးသည်၊ အချိန်မည်မျှကြာကြာ သုံးသည်များကို စိစစ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖောက်သည်များ၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကို ပိုမိုသိရှိရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ဖောက်သည်များ၏ Y-PAY နှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးစားရန်အတွက်သာ ဤ information များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့်သည် သင် Y-PAY Web site ထဲသို့ မ၀င်မီကြည့်ရှုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် Y-PAY Web siteထဲမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် ကြည့်ရှုလိမ့်မည့် Web siteများကို စုံစမ်းနေမည် မဟုတ်ပေ။
အကယ်၍သင်သည် Y-PAY site ထဲသို့ တူညီသော Computer နှင့် brower ကိုသုံး၍ ပြန်ဝင်လာပါက သင်သည် Y-PAY customer တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်မိစေရန် ကျွန်ပ်တို့မှ သင်၏ computer ဆီသို့ ပေးပို့မည့် data များပါဝင်သည် files လေးများကို “Cookies” ဟုခေါ်သည်။ သင်၏ e-mail address နှင့် password ကို ရိုက်ထည့်၍ Y-PAY account ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့က သင့် Computer ထဲသို့ session cookie” ကိုပေးပို့မည်။ ဤ cookies က တချိန်ထဲတွင် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ site ထဲရှိ စာမျက်နှာများ စွာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေစဉ်တွင် သင့်အားမှတ်မိစေမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် သင်၏ Password ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်နေစရာ မလိုတော့ပေ။ သင်ထွက်သွားလျှင်(သို့) သင့် browser ကို ပိတ်လိုက်လျှင် ဤ cookies မှာ မည်သည့် သက်ရောက်မှုမှ မရှိပဲ ပြီးဆုံးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ e-mail address ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Sign-in form တွင် ပြသရန် ကြာရှည်ခံသော cookies များကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဤ နည်းဖြင့် သင့်အနေနှင့် သင်၏ Y-PAY account သို့ ဝင်ရောက်သော အချိန်တိုင်း e-mail address ကိုပြန်ရိုက်နေရန် လိုတော့မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထပ်ဆင့် ညွှန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထပ်မံအသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies files များမှာ လျှို့ဝှက်ထားသောကြောင့် Y-PAY ဖြင့်သာလျှင် သင်၏ e-mail address မှ အခြားအချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ် ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Y-PAY တွင် တရားဝင် စာရင်းသွင်းထားသည်ဟု သေချာသော အသုံးပြုသူကိုသာလျှင် cookies information ကိုဖြန့်ဝေပေးမည် ဖြစ်သည်။
သင်၏ e-mail များ၊ faxs များကဲ့သို့ စာများပေးပို့ပါက သင် account ၏ မှတ်တမ်းများထဲမှ information ကို ရယူမည် ဖြစ်သည်။ custormer ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားသော စာပေးစာယူကိစ္စများကိုလဲ Y-PAY မှတဆင့်သာ သင်နှင့်ဆောင်ရွက် ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမှတ်တမ်းများကို customer ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ တိုင်းတာရန်၊ တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လိမ်လည်လှည့်စားမှုများ နှင့် user သဘော တူညီချက်များ ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တို့အတွက် ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
3. သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု များကိုထုတ်ဖော်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောက်ခံရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်ပါ အစဉ်လိုက်တိုင်းအသုံးပြုသည်။
Y-Pay Customers နှင့် Third Parties များကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် Y-PAY အား e-commerce အတွက်ရည်ရွယ်၍ သုံးသည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်ပေးထားသော Website address (URL) နှင့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ ကိုလည်း အခြား Y-PAY customer များသို့ ပြသမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်၏ Bank account နံပါတ်နှင့် အခြား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်များကိုမူ Y-PAY မှ တဆင့် ငွေပေး/ ငွေယူလုပ်သော မည်သူကိုမဆို မည်သည့်အခါမှ သိရှိစေမည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သမ္မန်စာ(သို့) အခြား ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါကမှု ချွင်းချက်အနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြသမည် ဖြစ်သည်။
Y-Pay က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားသူသို့ရောင်းချခြင်း ဌားရမ်းခြင်းများ ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Y-Pay မှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားသူများနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်အခြေအနေများ (သို့) အထက်တွင် ဖော်ပြပြီးသော အခြေအနေမှ Y-Pay customers များ (သို့) သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မှ လွဲ၍ ခွဲဝေ အသုံးပြုမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုစည်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးသော companies များ (သို့) ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေသော အခြားငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ ထုတ်ဖော် ပြသပါသည်။ဤ Companies သည် သင်၏ သဘော တူညီချက်(သို့)အခြားသော အသုံးပြုမှုအတွက် သင်၏ခွင့်ပြုချက်မျိုးမှ လွဲ၍ Y-Pay နှင့် ဆက်စပ်သော ထုတ်ကုန်များ(သို့)ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန်မှတပါး သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းအား တားမြစ်ထားသော ဥပဒေရေးရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် လျို့ဝှက် သဘောတူညီမှုများ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပြုလုပ်ထားသော companies များဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လိမ်လည်မှုများကို သို့ အခြားတရားဝင် လုပ်ဆောင်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက(သို့) ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအား စုံစမ်းရပါက သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။အဓိက ဆိုရသော် အခြားတဖက်မှ လိမ်ညာလှည့်စားမှု ပြုလုပ်နေကြောင်းတွေရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ တောင်းဆိုထားသော User အား လိမ်ညာသောသူ၏ သတင်းအချက်အလက်(bank account (သို့)credit card မပါ) ကိုပေးမည် ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မန်စာကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမိန့်စာများအတွက်မူ information ကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် information ကို သင်၏ ကိုယ်စားလှယ်(သို့)ဥပဒေရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်။
Y-PAY Customers နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တောင်းဆိုသော ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်စည်းရန်အတွက် ပုံမှန် နည်းလမ်းဖြစ်သော e-mail ကို သုံး၍ user များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖုန်းဖြင့်လည်း customer များ၏ မကျေနပ်မှုများ ဖြေရှင်းရန်(သို့) မသင်္ကာစရာကောင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်များ စုံစမ်းရန်ကိစ္စတို့ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ e-mail address အား သင်၏ Y-Pay account ဖွင့်ခြင်းအားအတည်ပြုရန်၊ Y-Pay မှတဆင့် သင့်ငွေပေး၊ငွေယူခြင်းတို့ကြောင့် သတိပေးစာတို့ကို သင့်ထံပေးပို့ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့် အပြောင်းအလဲများသတင်းကို သင့်ဆီပေးပို့ရန်နှင့် သတိပေးစာနှင့် အခြားဥပဒေအရ လိုအပ်သော ထုတ်ဖော်ချက်များပေးပို့ရန် အသုံးပြုပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် user များသည် ဤဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။သို့သော် ၎င်းတို့သည် သတင်းများကို လက်ခံယူနိုင်ခြင်းသာရှိ၍ ဆင့်ပွားဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပေ။
4. သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး Y-Pay သည် သင်၏ customer အချက်အလက်များကို မြင့်မားလှသော လုံခြုံရေးအခြေအနေများနှင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် တာဝန်ယူထားရပေသည်။ သင့်အား product (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းများကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သုံးစွဲခြင်းအား တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖက်ဖက်မှ စိတ်ချရသော လုံခြုံရေးများနှင့် သင့်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေး စနစ်အား အစဉ်အမြဲ စစ်ဆေးလျှက်ရှိသကဲသို့ ပြင်ပ companies နှင့်လဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးစနစ်များကို စစ်ဆေးရန် စာချုပ်ကိုလည်း ချုပ်ဆိုထားပါသည်။ Y-Pay လုံခြုံရေးနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများ ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက Y-Pay Security Centre သို့ လာရောက်ခဲ့ပါ။ သင်၏ Y-Pay account လုံခြုံရေးမှာ သင်၏ Y-Pay Password အား သင်မှကာကွယ်ခြင်း အပေါ်၌ မူတည်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား Y-Pay Password ကိုမည်သူနှင့်မျှ မျှဝေမသုံးစွဲရန် ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ပေသည်။ Y-Pay မှ တာဝန်ရှိသူများက သင်၏ Password ကိုသင့်အား မည်သည့်အခါမျှ မေးလိမ့်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် email (သို့) ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းဖြင့် သင်၏ Password အား တောင်းခံလာခြင်းသည် တရားမဝင်ပေ။ သင်သည် သင်၏ Y-Pay Password အားအခြားသူနှင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မဆို(အခြားသူမှ သင့်အား account aggregature ကဲ့သို့ တပ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးမည်ဟု ကတိပြုခြင်း အပါအဝင်) မျှဝေသုံးစွဲပါက ၎င်းမှာ သင်၏ account နှင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သင်၏ Password အသုံးပြုခြင်းအပေါ် အရေးယူပါက သင်၌သာ တာဝန်ရှိပေမည်။ အကယ်၍ တစုံတယောက်က သင်၏ Password ကို ရယူသုံးစွဲနေသည်ဟု ယူဆပါက https://www.ypay.com.mm ရှိသင်၏ account သို့ချက်ချင်းဝင်ရောက်ရန် သင်၏ Password နှင့် Profile setting တို့ကို ပြောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီကိုလည်း ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ရပေမည်။
5. သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ သင်ပေးထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထိုအချက်လက်များ(သို့) Y-Pay account ၏ settings တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို Y-Pay Web site မှ သင်၏ account ထဲသို့ ဝင်ရောက်၍ Profile page ရှိ “My Account” tab မှတဆင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏ account ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ customer ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်၍လည်း ပိတ်နိုင်ပါသည်။အကယ်၍ ပိတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ database ထဲတွင် သင်၏ account ပိတ်ပြီးကြောင်း မှတ်သားထားလိမ့်မည်။ သို့သော် သင့် account ၏ information ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ database ထဲတွင် ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့သိမ်းဆည်းသည်မှာ လိမ်လည်သော သူတစ်ယောက်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ရှောင်ကျဉ်ရန်အတွက် account အဟောင်းအား ပိတ်ပြီး account အသစ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် လိုအပ်လှပေသည်။ သို့သော် သင်၏ account ကို ပိတ်လိုက်ပါက ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်နှင့် လိမ်ညာမှုမှ ကာကွယ်ရန်မှလွဲ၍ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို အသုံးပြုတော့မည် မဟုတ်ပေ။
6. Y-Pay နှင့်ဆက်သွယ်ရန်။ သင်၌ ဤ Privacy statement, or User Agreement တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစရာများ ရှိပါက သင်သည် ဤ form ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း privacy@ypay.com.mm (သို့) Contact Us page မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ e-mail ပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။